Archive du 20170113
Horohorontany Maro no simba tao Antsirabe
Nihovitrovitra ny tany omaly tokony ho tamin�ny 1 ora sy 7 minitra maraina ka tao anatin�ny 40 segaondra ny faharetany, ary teo amin�ny 5,9 amin�ny mari-pandrefesana �Richter� ny tanjany,
Filoha Tiorka ho avy eto Madagasikara Tsy tena mazava ny anton-diany
Ny sabotsy 21 janoary izao, raha tsy miova ny fandaharam-potoana, no higadona eny amin�ny seranam-piaramanidina Ivato ny filoham-pirenen�i Tiorkia, Recep Tayyip Erdogan. Hiaraka amina mpandraharaha manodidina ny 300 isa izy,
Fanjakana Rajaonarimampianina Matahotra mafy
Mampiahiahy ny fihetsiky ny fitondrana ankehitriny. Toa tsy manao afa tsy manamafy ny toerany, hany ka manambitamby ny tafika sy ny mpitandro ny filaminana no anton-draharaha.
Faneva Raholdina Ny fanjakana tsara tantana ihany no mahomby
Na eo amin�ny ambara fa fitondrana tantanan�olon-tokana (Etat unitaire) na eo amin�ny lazaina fa fitondrana federaly (Etat federal), hoy ny mpandinika politika Faneva Raholdina, dia izay manara-dal�na sy mampihatra ny fanjakana tsara tantana ihany no tena mahomby.
Taratasin�i Jean Ovay ny famindra !
Miarahaba anao indray aloha ry Jean amin�izao fahafahanao mbola mampiesona anay izao a ! Dia mbola izany ihany tokoa ve no hotohizanao mandritra ity taona ity ?
Mpitatitra ao amin�ny UCTU Nanome � Ultimatum � ny fanjakana indray
Tsy hita intsony izay tena marina amin�ny zavatra tadiavin�ny avy eo anivon�ny vondron�ny mpitatitra eto Antananarivo Renivohitra na ny UCTU.
Polisim-pirenena Hanamafy ny traikefa azo tamin�ny 2016
Nahazoana traikefa maro ny fandalovan�ny fihaonamben�ny Comesa sy ny Frankofonia tamin�iny taon-dasa iny ho an�ny avy eo anivon�ny polisim-pirenena manokana,
Taona 2017 Ratsy fiatomboka
Zandary iray sahady no namoy ny ainy vokatry ny fifandonana tamin�ny dahalo tamin�ny fiandohan�ity taona 2017 ity.
FIVONDRONAN�NY MPITATITRA ETO AN-DRENIVOHITRA Vonona ny hiara-hiasa akaiky amin�ny kaominina Antananarivo renivohitra
Niarahaba ny Ben�ny Tananan�Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana nahatratra ny taona vaovao 2017 omaly ny Fivondronamben�ny mpitatitra eto an-drenivohitra na ny UCTU.
FARITRA ANALANJIROFO Tata-drano miisa 18 lehibe no hamboarina
Tongotra mby an-dakana ny fampandrosoana ho an�ny Faritra Analanjirofo.
Marohoho Tsimbazaza Tapa-doha ilay mpivarokena
Ankoatra ny tsindron�antsy dia mbola mahazo vahana eto amintsika ihany koa amin�izao fotoana izao ny fanapahan-doha.
SALON DE L�ETUDIANT Ahitana ny torohevitra maro ho an'ireo mpianatra
Ny lalam-piofanana paramed sy ny fitantanana ary ny management no mbola tena mahasarika ireo mpianatra vao afa-panadinana Bakal�rea eto amintsika.
JMJ Mada 2018 Miahiahy ny Katolika noho ny fifidianana filoham-pirenena
Vinavinan�ny Vovonam-pirenena katolikan�ny Tanora hotanterahina ao an-drenivohitry ny Faritra Boeny ny 29 aogositra hatramin�ny 2 septambra 2018 ny Andro manerantany ho an�ny Tanora, na ny JMJ Mada (Journ�e mondiale de la Jeunesse) andiany faha-9.
VEHIVAVY DORKASY FOIBE FJKM SY NY BEN�NY TANANA Mifanakaiky tanteraka
Tsy afa-misaraka ny fitantanana sy ny Finoana amin�ny ankapobeny.Matoa mantsy misy ny olona tsy manara-dal�na dia noho ny tsy fahafantarany an�Andriamanitra izay.
Fifanandrifiana sa � ?
Taona vitsivitsy lasa izay dia efa nisy nandoro ny teny an-tampon�Ambohimalaza, Antananarivo Avaradrano.